जुम्लामा प्रहरीको गोलीबाट प्रहरीकै मृत्यु ! - जुम्लामा प्रहरीको गोलीबाट प्रहरीकै मृत्यु !
जुम्लामा प्रहरीको गोलीबाट प्रहरीकै मृत्यु !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ३ श्रावण, 09:50:07 AM
काठमाडौं । अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन स्थल बाहिर भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका प्रहरी जवानको मृत्यु भएको अपुषट समाचार प्राप्त भएकाे छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख डिएसपी तपन दाहालका अनुसार प्रहरी जवान कमल उपाध्यायको मृत्यु भएको दावी गरे । जवान कमल उपाध्यायको छातीमा गोली नभई िससा लागेर मृत्यु भएको बताइर्एकाे छ ।
अनसनरत डा केसीलाई काठमाडौँ ल्याउन सरकारको टोली जुम्ला पुगेपछि स्थानीयले गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा कार्यरत प्रहरी जवान कमल उपाध्याय घाइते बनेका थिए। उनको छातीमा गोली लागेको बताइएको छ।
प्रहरीले अन्धधुन्ध लाठी चार्ज गर्दा र गोली चलाउँदा प्रहरीलाई नै लाग्न पुगेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। घाइते उपाध्यायको जिल्ला अस्पताल जुम्लामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हल्ला चलाइर्एकाे छ ।
यसैबीच जुम्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनसनरत डा गोविन्द केसीलाई १० मिनेट भित्रमा अस्पतालबाट बाहिर निस्कने समयसीमा दिएको छ। उक्त समयमा बाहिर ननिस्के बल प्रयोग गरेर अस्पतालबाट बाहिर निकाल्ने चेतावनी दिएको छ।
२०७५, ३ श्रावण, 09:50:07 AM